Home News Xildhibaanada Baarlamaanka oo Maanta Kulan leh,Maxeey ka doodayaan!!
Xildhibaanada Baarlamaanka oo Maanta Kulan leh,Maxeey ka doodayaan!!
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maalita oo Arbaco ah taariikhduna ku beegan tahay 3-da bisha Octoober 2018, kulan ku yeelanaya xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho.
Ajendaha kulanka Maanta ayaa ah sii wadista dooda ku saabsan dib u eegista xeer hoosaadka Golaha Shacabka kaas oo Maalintii Isniinta aheyd ee la soo dhaafay ay siweyn uga doodeen Xildhibaanada.
Ajandaha Maanta ee ku saabsan dib u eegista xeer hoosaadka Golaha Shacabka ayaa doodiisu waxa ay bilaabatay Maalintii Sabtida aheyd ee todobaadkii la soo dhaafay,iyada oo dooda ajandahaan ay tahay mid aad u dheeraatay.
Dadka dhinaca Siyaasada indha-indheeya ayaa aaminsan in ajandaha Baarlamaanka haatan horyaalla oo ay doodiisu aocoto uu yahay mid lagu mashquulinayo Xildhibaanada.
Previous articleXassan Shiikh oo Bedelay Magaca Xisbi Dhawaan Gudoomiye Looga dhigay(AQRISO)
Next articleWarar dheeraad ah oo kasoo baxaya Duqeeyn ka dhacday Deegaanka Basra Ee Gobolka Sh/dhexe!!
Mareykanka oo duqeyn kaga jawaabay weerarkii Balli-Doogle
Xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si kulul uga hadlay sababta kentay in...